warkii.com » Mareykanka oo shaaciyey inuu duqeyn ku dilay 7 ka mid ah Daacishta Soomaaliya
Mareykanka oo shaaciyey inuu duqeyn ku dilay 7 ka mid ah Daacishta Soomaaliya
Boosaaso (warkii.com) – Warsaxaafadeed ka soo baxay taliska Africom ayaa waxaa lagu faah-faahiyey duqeyn ay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay 21-kii bishaan ka fuliyeen qeybo ka mid ah gobolka Bari ee dowlad goboleedka Puntland.
Duqeynta oo ka dhacday deegaanka deegaanka Timirshe oo 140 km u jira magaalada Boosaaso ayaa waxaa Africom ay shaacisay in lala eegtay kooxda Daacish.
Qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi dhanka cirka oo ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamo Soomaali ah iyo kuwa Mareykan ah lagu dilaay illaa 7 xubnood oo ka tirsanaa kooxda Daacish faraceeda Soomaaliya oo ku xoogan buuraleyda gobolka Bari.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay sii wadi doonaan howl-gallada ka dhanka ah kooxaha Al-Shabaab iyo Daacish ee ay ka fuliyaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Warka ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ayaa ku soo aadaya, iyadoo duqeyntaasi, kadib dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka Timirshe, kaas oo u dhexeeyey ciidamada sida gaaarka ah u tababaran ee PSF-ta Puntland iyo Daacish.